आन्दोलनको पुस्तान्तरण – Martin Chautari
Call for Papers/Panels: Chautari Annual Conference – 2022 [deadline extended]
समाज अध्ययन जर्नल अंक १८ का लागि लेख/रचना आह्वान
History Team Members Annual Reports Audited Financial Reports Policies Partners Fellowships
Upcoming Events Completed Events Reading Seminar
Chautari Book Series Research Briefs Journals Bibliographies Author Indexes Reports Other Books
Library Online Catalogue Library Support
Reading Lists Libraries Where MC's Books are Available Useful Resources Research Tools Softwares
- कैलाश राई | 2021-09-24
गएको दुई दशकमा नेपालको महिला आन्दोलनले राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी रूपमा फड्को मारेको छ । महिलालाई हेर्ने परोपकार, उद्धार र उत्थानको दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदै गएको छ । महिला विकासको ‘वस्तु’ बाट ‘संवाहक’ मा परिणत हुँदै छन् ।
महिला कुनै वस्तु होइनन् । संवाहक मात्रै पनि होइनन् । नेतृत्वकर्ता हुन् । शक्तिशाली ‘एजेन्सी’ हुन् । शक्तिकेन्द्र हुन् । यो महिला आन्दोलनले स्थापित गर्न खोजेको मान्यता हो । परिवर्तन गर्न चाहेको मानसिकता हो । यसका लागि महिलामाथि राखिने पुरातन मान्यता र एकांगी सोच भत्काउनु अनिवार्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय–राष्ट्रिय–क्षेत्रीय–स्थानीय राजनीतिक र सामाजिक दबाबसँगसँगै महिला आन्दोलन यसैका निम्ति निरन्तर संघर्षमा छन् ।
१० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, दोस्रो जनआन्दोलन, त्यसपछिका चरणबद्ध मधेस आन्दोलन र विविध महिला आन्दोलनलगायतले महिलामाथिको पुरातन सोच बदल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न महिलाले सधैँ पुरुषको संरक्षण र सुरक्षामा राखिनुपर्ने कमजोर महिला छविको घेरा तोडे । दोस्रो जनआन्दोलनसँगै नेपाली महिलाका संगठित आवाज मुखरित भए । मधेस आन्दोलनमा सक्रिय महिलाले ‘घरेलु’ वृत्तमा कैद मधेसी महिला पहिचानको बन्धन तोडे । सार्वजनिक वृत्तमा सामूहिक र प्रभावकारी उपस्थिति जनाए ।
वादी महिला आन्दोलनले ‘कमसल’, ‘स्तरहीन’ मानिएका महिलाका यौनिकता र शरीरमाथिको अधिकारका विषयमा एउटा नयाँ आयाम थप्यो । कमलरी महिला आन्दोलनले ‘दासी’/‘बन्धक’ महिलाको खास प्रतीकात्मक छवि भत्कायो । यौनिक–लैंगिक अल्पसंख्यक महिला आन्दोलनले महिला–पुरुषको द्विलिंगी परम्परागत मूल्य–मान्यताको कठोरपनमाथि प्रहार गरिरहेको छ । महिलाको जैविक–यौनिक–सामाजिक लिंगमा आधारित निश्चित पहिचान र अभ्यासको दायरा बढायो ।
मनोरन्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका आन्दोलनले मनोरन्जनात्मक प्रकृतिका भनिने क्रियाकलापलाई श्रमको पहिचान दिने काम गर्‍यो । त्यस्तो श्रमको सम्मान गर्ने मान्यता विकास गर्न र रोजगारीको पुरातन मान्यता र क्षेत्रलाई पुनर्व्याख्या गर्न घच्घच्याउँदै आयो । दलित महिलाले जात व्यवस्थामा आधारित शोषण, विभेद र असमानता भत्काउने लडाइँ लड्दै आए । अपांगता भएका महिलाका आन्दोलनले बौद्धिक, शारीरिक र मानसिक सक्षमता मापनको संकीर्णतालाई तोड्ने कसरत गर्दै आयो । आदिवासी–जनजाति र मधेसी महिलाले ‘नेपाली’ महिलाको एकीकृत पहिचान विनिर्माण र पुनर्परिभाषा गर्नमा आवाज दिए ।
यस्ता विविध सवालगत महिला आन्दोलनले नेपाली समाजको उचनीच र असन्तुलित लैंगिक–जातीय–वर्गीय–क्षेत्रीय शक्तिसम्बन्ध र हैसियतको जड पितृसत्ता नै हो भन्ने बुझाइमा रहेको अपूरोपनलाई उधिन्न थाले । उक्त बुझाइको अपूरोपनको पहिचान र त्यसको पुर्तालतर्फ ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलनको ध्यान तान्यो । प्रभुत्वशाली विचार, ज्ञान र सोचका आधारमा निर्मित सवालको वर्चस्वलाई धक्का दियो ।
यी सबै आन्दोलन र तिनले उठाएका सवालले नेपालको महिला आन्दोलनको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपान्तरण फ्रक्रियामा सशक्त भूमिका खेले । अहिले महिलाका हकमा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुने क्रममा छ । सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक सहिष्णुता र राजनीतिक समावेशिता एवं प्रतिनिधित्वको पक्षलाई आन्दोलनले अँगाल्न थालेको छ । समावेशी सिद्धान्तका आधारमा विभिन्न नीति तथा ऐन–नियम परिमार्जन वा संशोधन गर्ने क्रम पनि जारी छ । यो आन्दोलनको समसामयिक रूपान्तरणको सुखद पाटो हो ।
सवाल पुस्तान्तरणको हकमा, महिलाका लागि उपलब्ध हुने औपचारिक समानता र आंशिक उपलब्धि अस्वीकार गर्ने गरिएको छ । आमाको नाममा नागरिकताका लागि बहुपुस्ता र बहुसमूहको निरन्तर विरोध प्रदर्शन एउटा उदाहरण हो । समाजमा देखिने लैंगिक विभेद र त्यस्ता विभेदलाई मलजल गर्ने सहायक पक्षप्रति तत्क्षण विरोध गर्न सक्ने जमात छन् । महिलाका लागि विनियोजित स्रोतसाधन र प्राप्त उपलब्धिमाथि सीमित महिलाको एकाधिकार तोड्ने चेष्टा पनि गर्दै छन् । यसो गर्नुको बृहत् उद्देश्य महिलाले सारभूत समानताको बोध र उपभोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । त्यसका लागि सबै महिलाप्रति सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्नेदेखि उपलब्धि उपभोगसम्म समान पहुँच हुनुपर्छ ।
सारभूत समानता, समान व्यवहार र उपलब्धिको समान उपभोगको सुनिश्चितताका लागि ‘मूलधार’ र सीमान्तीकरणको सपाट वर्गीकरण एक मात्र उपयुक्त आधार भने होइन । नेपाली समाजको विविधता, महिलाको फरक–फरक भूमिका र अवस्थाको हकमा यी दुई वर्गीकरणभित्र नपर्ने महिला पनि धेरै नै छन्, जसले महिला हक अधिकारका लागि आ–आफ्नै ढंगले लड्दै आइरहेका छन् । उनीहरूका भूमिका र सरोकार आन्दोलनमा कहाँनेर कसरी समेटिन्छ ?
महिला आन्दोलनले महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानता प्राप्तिको आधार–स्तम्भ नारीवादी सिद्धान्तमा आधारित लैंगिक मूल प्रवाहीकरण, समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व हो भन्ने मान्यता बोक्छ । एकातिर, विविधताको सन्दर्भमा ‘इन्टरसेक्सनल’ नारीवादी अवधारणा उपयुक्त हुन सक्ने कुरा पनि उठ्न थालेको छ । अर्कोतिर, महिला अधिकार प्राप्ति र उपभोगका लागि नारीवादी नै हुन आवश्यक नभएको विचारधारा राख्ने जमात पनि आन्दोलनकै हिस्सा हुन् । तसर्थ अबका दिनमा भिन्न मत र अनेक भूमिकाको स्थान आन्दोलनभित्र के र कहाँ होला ? समानता र न्यायोचित समाज निर्माणको बृहत् सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरण प्रक्रियामा त्यसको प्रभाव के–कस्तो रहला ? सोचनीय कुरा हो ।
आन्दोलनको सवाल रूपान्तरण र नेतृत्व फुस्तान्तरणको क्रममा आन्दोलित शक्ति थप विकेन्द्रित हुँदै गएको छ । लघु शक्तिकेन्द्रहरू निर्माण भएका छन् । सोहीअनुरूप नेतृत्वपंक्ति उत्पादन पनि भइरहेको छ । यस्तो नेतृत्व निर्माण र स्वीकार्य हुनु सुखद पाटो हो । यसलाई दुई कोणबाट बुझ्ने गरिएको छ । पहिलो, यसले महिला आन्दोलनको एकक्रित शक्ति क्षय गराएको छ । पुस्तागत नेतृत्वपंक्तिमा विभाजन आएको छ । भावी नेतृत्व उत्पादनको स्वीकार्यतामा कमी ल्याएको छ । दोस्रो, विविध सामाजिक आधारभूमिका महिलाको शक्ति एकत्रित स्वरूपमा मात्रै कामकारी हुन सक्दैन । त्यसका लागि नेतृत्वपंक्तिको उत्पादन र विकास पनि बहुकेन्द्रीय स्वरूपमा हुनुपर्छ ।
यहाँनेर आन्दोलनले विकेन्द्रित शक्ति र नेतृत्वको उपयोग कसरी गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ । पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचबाट वञ्चित, शक्ति र सत्ताको विभेदको सिकार भएकाहरूप्रति हेर्ने राज्यको नजरमा बदनियत झल्किन्छ । अग्रगामी सोच र कार्यक्रमको कुरा त छँदै छैन । त्यसले लामो संघर्षपछि हासिल उपलब्धि जोगाउन पनि हम्मे पर्ने स्थिति ल्याउँछ ।
यस्तो अवस्थासँग लड्न आन्दोलनको सामर्थ्यमा कमीको आझास हुन्छ । र, आन्दोलनको शक्ति क्षयीकरणको कारक महिलाका विकेन्द्रित शक्ति र विभाजित नेतृत्वलाई ठहर्‍याइन्छ । ‘महिला नै महिलाको शत्रु’ भन्ने उक्तिलाई पुष्टि गरिन्छ । स्मरणीय पाटो, महिलाको सत्ता स्थापित नभएकाले उनीहरूको केन्द्रीकृत शक्तिको स्वरूप पनि कहिल्यै स्थापित भएन । सीमित स्रोत र शक्तिमा धानिँदै र लड्दै आएका महिलाका लागि महिला शत्रु जन्माउने राज्य शक्ति–संरचना नै हो ।
जुनसुकै वृत्त वा क्षेत्रबाट उत्पादित नेतृ भए पनि नेतृत्वको स्वीकार्यतामा उसको सामाजिक पहिचानको मानक विम्ब भत्किएको छैन । लिंगीय–वर्गीय–जातीय–क्षेत्रीय पहिचानले उसको सामाजिक स्वीकार्यतामा पार्ने गरेको प्रभाव हटेकै छैन । लिंगकै आधारमा कुनै नेतृ सिर्फ ‘महिला नेतृ’ मै सीमित छ । ऊसँग भएका विचार, ज्ञान र सक्षमताभन्दा बढी उसको लैंगिक पहिचानको वजन भारी हुन्छ । पुरुष भने कुनै एक लिंगको नेता मात्रै बन्नुपर्ने बन्धनबाट मुक्त छ । महिला नेतृत्वको घेरा साँघुर्‍याउने आधार र मनोवृत्ति पनि नेतृत्व स्वीकार्यताको सीमा निर्धारक बन्ने गरेको छ । जस्तै, मधेसी महिला नेतृ, दलित महिला नेतृ आदि । विषयवस्तु र सवालमाथिको पकडभन्दा उनीहरूको लैंगिक–सामाजिक पृष्ठभूमिलाई तौलिने गरिन्छ । सबल नेतृत्व पुस्तान्तरणको खातिर समुदाय वा समूहभित्र मात्रै नेतृत्वको क्षेत्र सीमित राख्ने र स्वीकार्यता प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति चौतर्फी रूपमा तोड्नैपर्छ । तब डा चन्द्रा भद्राले भनेझैँ ‘रिले अनशनजस्तै चल्ने महिला आन्दोलन’ चलाउनका लागि सवाल र नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सक्छ ।
राई लैंगिक एवं सामाजिक न्यायमा रुचि राख्ने समाज विज्ञान अध्येता हुन् ।
Previous आन्दोलनको पुस्तान्तरण Next
Mallika Shakya: The daughter who found her own feet
- Mallika Shakya 2022-06-20
What goes on in Nepal’s elections
- Shekhar Parajulee 2022-06-19
विश्वविद्यालयको विकृति र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन
- मधुसूदन सुवेदी 2022-06-17
MC Review of Books
Power And Politics Plague Policy
स्थानीय चुनाव पर्यवेक्षणमा जे देखियो
- शेखर पराजुली 2022-06-17
पर्यावरणीय पुँजीवादी त्रासदी
- भास्कर गौतम 2022-06-06
- भास्कर गौतम 2022-05-22
Why aren’t more women selected as candidates?
- Seira Tamang 2022-05-16
पितृसत्ताको जरो काट्न ज्ञानको हतियार चाहिएको छ
- कैलाश राई 2022-05-10
सामाजिक सञ्जालको भुलभुलैया
- दीपक अर्याल 2022-04-28
इन्टरनेटमा हामी कति सुरक्षित?
- हर्षमान महर्जन 2022-04-26
- भास्कर गौतम 2022-04-11
Support Martin Chautari to promote research
5338050, 4102027, 4102243
Copyright © 2021 Martin Chautari. All Rights Reserved.